ओलीको बोलिले एकता धरापमा ! - Bulbul Samachar
ओलीको बोलिले एकता धरापमा !
bulbul आइतवार, साउन १७ गते 172 views
दोस्रो तहका नेता पार्टी एकता गर्न प्रयासरत छन्। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बोली र क्रियाकलाप भने एकताभन्दा पार्टी विभाजन उन्मुख छन्। शनिबार ओली र नेपाल छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सहभागी भए, दुवैले एकताभन्दा एकता विरोधी अभिव्यक्ति दिए। दुवै नेताका गतिविधिले अब एक ठाउँ बस्न नसक्ने झल्को दिन्थ्यो।
ओली शनिबार काठमाडौं जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठकमा पुगे भने वरिष्ठ नेता नेपाल युथ फोर्सको समानान्तर रूपमा गठन गरिएको अखिल फोर्सको भेलामा गए। दुवै जना शक्ति प्रदर्शनमा लागेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नरहेको उद्घोष नै गरे। काठमाडौं जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठकमा बोल्दै बाटो बिराएकाहरूलाई ठाउँ भए पनि नेपाल जस्तालाई ठाउँ नभएको बताए। ‘माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीलाई कुनै ठाउँ छैन,’ अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘वामपन्थी सरकार ढाल्ने, आफ्नो अध्यक्षले माग्दा पनि विश्वासको मत नदिने, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर फोलर क्रस गर्ने।’ अध्यक्ष ओलीले जनताको सरकार ढलेर दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर जनताको सरकार ढालेको आरोप लगाए ।
‘लगभग दुई तिहाइको स्थितिलाई बहुमतमा पुर्‍याए। प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिलेर एमाले सरकार ढाले। एमाले सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर संविधानको रक्षा गर्यौं भनेका छन्,’ उनले भने।
उता वरिष्ठ नेता नेपालले पनि अध्यक्ष ओली पुन : प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न गठन गरिएको अखिल फोर्सको भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले भने,’ प्रतिनिधिसभाको रक्षा गर्दै सांसदहरूले भोट दिएर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ अब। यो प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने कसैले दुश्साहस नगरोस्। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भनेर जालझेल र षड्यन्त्र कसैले नगरोस्। जे गर्नुछ, पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाले सविधानको संरक्षण भएको स्पष्ट पारे। ‘संविधानको संरक्षण भएको छ। संविधानको सही ब्याख्या भएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हामी सम्मान गर्न चाहन्छौं।’ वरिष्ठ नेता नेपालले संविधान जोगाएर बनेको नयाँ सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउन पनि आग्रह गरे।
अखिल फोर्सको भेलामा माधव पक्षको नेतृ रामकुमार झाँक्रीले एकताका लागि रहेको दोस्रो तहका नेताप्रति आक्रोश पोखेकी छन्।
स्थायी समिति स्थगित
विघटित कार्यदलका सदस्यको आग्रहका कारण शनिबारको तोकिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। एकताका लागि सहमति जुटाउन प्रयास जारी राख्न स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको छ। नेपाल पक्षका कार्यदलका सदस्यले सहमति जुटाउन वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन् भने ओलीसँग भेटेर निर्णायक अवस्थामा पुर्‍याउने बताइरहेका छन्।
वरिष्ठ नेपाललाई एकताको आग्रहमा नै संस्थापन पक्षका पौडेल र नेम्बाङले शुक्रबार र शनिबार पालैपालो भेटेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल आफूलाई ओली बराबरको हैसियत पार्टीमा भए मात्रै एकता गर्ने बताइरहेका छन्। नेपालका सर्त थपिँदै गएका छन्। उनी ओलीलाई अध्यक्ष मान्न पनि अनकनाइरहेका छन्।
भीरमुनी टोल सुधारले गर्‍यो सडक मर्मत !
कोरोना सङ्क्रमणबाट एकै परिवारको तीन जनाको मृत्यु !